အမည်မသိစာအုပ်: "မင်းမချစ်လဲနေပါ ရတယ်"
ပန်းဆိုးတန်းကားဂိတ်က ထုံးစံအတိုင်း စည်ကားနေ၏။ ညနေ ရုံးတွေဆင်းချိန်ဆို ကားဂိတ်မှာ တန်းစီနေကြတဲ့လူတွေက အလှူပေးနေတဲ့ မဏ္ဍပ်ရှေ့က တန်းစီစောင့်နေကြတဲ့ ကလေးတွေလို ကျိတ်ခဲနေကြသည်..။ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး တစ်ယောက်စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားရသည်..။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရုံးအုပ်ရာထူးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေရသူဖြစ်ပေမယ့် အသက်က (၃၉) နှစ်သာ ရှိသေးသည်..။ အရပ် အနည်းငယ် ပုကာ ခါးနည်းနည်း တုတ်စပြုလာပေမယ့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ လှပနေသေးသူပင်..။ အထူးသဖြင့် ဖင်အိုးကြီးတွေက အဆီတက်ကာ တင်းသထက်တင်း၊ ကားသထက်ကားနေခြင်းက သူမကို ပို၍ အလှတိုးစေသည်..။ ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ်ပေးသော ဖယ်ရီကားက ညနေ(၄) နာရီကတည်းက ပို့ဆောင်ရေးထွက်သွားပြီ..။ သောကြာနေ့မို့ အလုပ်တွေ အကြွေးမကျန်အောင် တစ်ခါတည်း ဖြတ်နေသဖြင့် (၅) နာရီခွဲသာသာလောက်မှ ရုံးဆင်းခဲ့ရခြင်းကြောင့် ယခုလို ကားဂိတ်မှာ ကားစောင့်နေရခြင်း ဖြစ်သည်.။ တာမွေအထိပြန်ရမည်မို့ အထူးကားပဲ စီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ကာ ဆိုက်ရောက်လာသော အထူးကားကို အပြေးအလွှား တက်ခဲ့ရသည်..။ “ ဟို ရှေ့နားလေးကို တိုးပေးကြပါဗျာ…၊ အကူအညီတောင်းတာပါ.. ဟိုဘက်က အစ်ကို..က ဟိုးနောက်လေးကို လျှောက်ပေးပါဗျာ..ဟုတ်ကဲ့..ကားခလေးတွေ..” ညနေ ရုံးဆင်းလူကြပ်ချိန်တွင် လူပို မတင်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အထူးကားတွေကလည်း ကြပ်ညှပ်နေသည်..။ သာမန်ကားတွေလို အထဲတွင် ခုံများဖြုတ်ထားသဖြင့် အလယ်လူသွားလမ်းလေးတွင် မတ်တတ်ရပ်ခရီးသည်များ ဖင်ချင်းပေါက်ကာ တိုးကျိတ်နေကြရသည်။ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး အတွင်းပိုင်း ကားအလယ်နားသို့ တိုးဝင်လာခဲ့သည်..။ စပယ်ယာရဲ့ လှမ်းအော်မှုကို မခံချင်သဖြင့် တိုးဝင်လာရသော်လည်း ကားအတွင်းပိုင်းမှာ အတော်ကို ကြပ်နေသည်..။
“ အစ်မ…ဒီကို ပေးထားလေ..ကျမ ကိုင်ထားပေးမယ်..”
လက်ထဲမှ ဖိုင်တွဲကို ခုံတွင်ထိုင်နေတဲ့ မိန်းမငယ် တစ်ယောက်က ကိုင်ထားပေးတာကြောင့် အဲဒီအနားမှာပဲ အဆင်ပြေသလို ရပ်နေလိုက်သည်။ အရပ်ပုသလို ရှိတာကြောင့် အပေါ်သံတန်းကို မမှီသဖြင့် အခက်အခဲ ဖြစ်နေရသည်။
“ အစ်မကြီး… ဒီနားက တန်းကို ကိုင်လိုက်လေ… ကျနော် ဒီဘက် ရွှေ့ပေးထားမယ်..လာ…”
ဘေးထိုင်ခုံမှ သံတန်းကို ကိုင်ကာ ရပ်နေသော အရပ်မြင့်မြင့် အသားညိုညို လူငယ်လေး တစ်ယောက်က ကိုယ်ကို ယို့ပေးလိုက်သဖြင့် တစ်စောင်းလေး တိုးဝင်ကာ ဘေးခုံမှ သံတန်းကို အားပြု ကိုင်ထားလိုက်သည်။ ကားကတော့ ရပ်လိုက်ထွက်လိုက် ၊ မှတ်တိုင်တစ်ခုမှာ ကျောက်ချလိုက်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။
အသက် (၂၀) ကျော်လောက်ပဲ ရှိအုံးမည့် လူငယ်လေးတစ်ယောက်က ဂရုတစိုက်ဖြင့် မေးလိုက်သဖြင့် သေချာ အကဲခတ်လိုက်မိသည်။ သူမရဲ့ တူမ ဝင့်ဝါထက် နည်းနည်း သာ ကြီးမည့် ကောင်လေးက အစ်မလို့ ခေါ်ကာ ဂရုစိုက်ပေးခြင်း ခံရသဖြင့်လည်း စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားမိသည်..။ တကယ်တော့…သူမ ဘဝက….. ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး..ဘွဲ့ရပြီးကတည်းက ယခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်..။ အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်း တိုက်စားသွားရင်း အသက်(၂၅) နှစ် .သူမ အထက်တန်းစာရေးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ရုံးအုပ်ကြီးဖြစ်သူ ကိုစောမြင့်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်..။ ကိုစောမြင့်က သူမကို အရမ်းချစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမထက် အသက် (၅) နှစ်သာ ကြီးတဲ့ ကိုစောမြင့်နဲ့ ချစ်ကမ္ဘာမှာ အပျော်ကြီး ပျော်ခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် .. ကံတရားက ..ကံဆိုးမှုတွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးလာခဲ့သည်…။ အိမ်ထောင်သက် (၈) နှစ် အကြာမှာ ကိုစောမြင့်တစ်ယောက် ကိုယ်တစ်ပိုင်း လေဖြတ်သွားခဲ့ရသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ကြည့်ရှုတဲ့အနေဖြင့် သူမကို ရုံးအုပ်ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးကာ လစာတိုးပေးခဲ့သောကြောင့် လင်သားရဲ့ ဆေးကုသစရိတ်နဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေ ကာမိခဲ့ရသည်..။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုစောမြင့်ရဲ့ တူမ ဝင့်ဝါကလည်း မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားကြသဖြင့် ကိုစောမြင့်တို့ လင်မယားကို ကြည့်ရှု ထောက်ပံ့နေခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် ဝင်ငွေ ကောင်းမွန်ခဲ့ရသည်။ အဆိုးထဲမှ အကောင်းများ ပြန်ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လေဖြတ်နေတဲ့ လင်သားကို ကြည့်ရှုရန် ဆွေမျိုးနီးစပ် အဒေါ်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူထားသဖြင့်လည်း သူမအဖို့ သက်သာခဲ့ရသည်။ သို့ပေမယ့် အသက်သုံးဆယ်ကျော် အရွယ် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုကတော့ ဘယ်လိုမှ မပြည့်ဝနိုင်တော့ပေ..။ ငွေကြေးအဆင်ပြေကာ စားနိုင်သောက်နိုင်အနေအထားမှာ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ အဆီစုကာ ဖွံ့ထွား စွင့်ကားလာတဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေက ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်မှုတွေကို တောင့်တလာခဲ့ရသည်။ ရုံးအုပ်ဆိုတဲ့ အရှိန်အဝါနှင့် ခြံနှင့်ဝန်းနှင့် နေထိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရုံးမှာရော ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ သူမကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မစရဲခဲ့ကြ.။ နောက်ကွယ်က မှန်းပြီးသာ စိတ်နဲ့ ပစ်မှားနေကြတဲ့ လူတွေ မနည်း..။ သူမကလည်း ကိုယ့်အရှိန်အဝါနဲ့ ထင်သလို မသောင်းကျန်းရဲပေ..။ နောက်ပြီး လင်က သေသွားတာမဟုတ်..။ ငုတ်တုတ်ကြီး မေ့နေတဲ့ ဘဝမှာပဲ ရှိသေးသည်။ ဒီတော့ သစ္စာလည်း မပျက်ချင်..။ ဒီလိုနဲ့ ခံစားနေရတဲ့ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေကို ညဘက် အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာပဲ အတွေးနဲ့ ဖြေဖျောက်နေခဲ့ရတာ နှစ်တွေလည်း မနည်းတော့..။ မိမိလင်သား ကိုစောမြင့်ရဲ့ တူမ ဝင့်ဝါက သူ့ဦးလေး လေဖြတ်သွားပြီ ဆိုတာ သိခဲ့ရချိန်မှာ သူ့ဦးလေး မိန်းမအတွက် နိုင်ငံခြားမှ လက်ဆောင်တစ်ခု ပို့ပေးခဲ့သည်။ ရာဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ယောက်ျားတန်ဆာအတု ကြီးကို သူ့ဒေါ်လေးအတွက် အဖော်ဆိုပြီး ရွှတ်နောက်နောက်ဖြင့် ပို့ပေးခဲ့သည်။ လေဖြတ်သွားသော လင်နှင့် အိပ်ရာအတူ အိပ်စက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့် သီးခြား အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ သူမအဖို့ ဝင့်ဝါရဲ့ လက်ဆောင်က တကယ်ပဲ အသုံးတည့်ခဲ့ရသည်..။ စိတ်ထဲက ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို မှန်းဆပြီး ထိုလီးတုကြီးဖြင့် အဖော်ပြု အိပ်စက်ခဲ့ရတဲ့ ညတွေက ညပေါင်း ရာချီနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ကားက ဘရိတ်ဆောင့်အုပ်လိုက်သဖြင့် ကားထဲမှ လူတွေရဲ့ အသံက စီကနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အတွေးတွေနဲ့ နစ်မျောနေတဲ့ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦးလည်း အခြေအနေပျက်သွားသော ကိုယ်ဟန်ကို လှမ်းဆွဲကာ ထိန်းပေးထားလိုက်သော အထိအတွေ့ကြောင့် ယခုလက်ရှိ အသိစိတ်တွေက အတိတ်ကို ပျောက်ကွယ်စေခဲ့ရသည်။ ရှေ့သို့ ယိုင်လဲမတတ်ဖြစ်သွားသော သူမကို လှမ်းဆွဲပေးလိုက်သူကို ကျေးဇူးတင်အကြည့်လေးဖြင့် ပြန်ငဲ့ကြည့်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရသည်။ ခုနက သူမကို ဂရုတစိုက်ရှိနေသော ကောင်လေးပင် ဖြစ်နေသဖြင့် အပြုံးလေးပါ အပိုထပ်ဆောင်းပေးလိုက်မိပြန်သည်။ ထိုကောင်လေးက ပြန်၍ ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူမနားသို့ အနည်းငယ် တိုးကပ်ကာ လေသံတိုးတိုးဖြင့်….
“ အစ်မ .. ကိုယ်ကို နဲနဲ ပြင်လိုက်ပါလား…တော်ကြာ ကားဘရိတ်အုပ်လိုက်ရင် လဲသွားအုံးမယ်…”
ကိုယ်ကို ခပ်စောင်းစောင်းလေး ပြုကာ အတွင်းဘက်ခုံ သံတန်းလေးကို ကိုင်ပြီး ပို၍ တိုးကပ်လိုက်သောကြောင့် ဘေးဘက်တွင် ကိုယ်တစ်စောင်းရပ်ကာနေသော လူငယ်လေး ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲသို့ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားခဲ့ရသည်။ သူမရဲ့ ဘေးမှ မိန်းမကြီးကလည်း ရှေ့မှ တိုးဝင်နေတဲ့ လူတွေကြောင့် သူမကို ဖိထားသလိုဖြစ်နေကာ ထိုကောင်လေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲသို့ မှီတွယ်နေသလို ဖြစ်လို့နေရသည်။ အစပိုင်းတွင်တော့ ရှက်စိတ်မွှန်ကာ ဘေးက မိန်းမဝဝကြီးကို ပြန်တွန်းပြီး ခွာကြည့်သော်လည်း မရတော့..။ ကားကလည်း ငါးပိသိပ်သလို ကျပ်လွန်းနေသည်။ မထူးတော့ပြီမို့ အသာပင် ငြိမ်ကာ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦးရဲ့ ကိုယ်က ကားပေါ်တွင် ငြိမ်သက်စွာ လိုက်ပါနေသော်လည်း သူမစိတ်တွေကတော့ မငြိမ်သက်နိုင်ပေ။ ဒီလို ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ် မထိတွေ့ရတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့..။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ကားစွင့်နေတဲ့ ဖင်ဆုံကြီးက နောက်မှ ကောင်လေး၏ ဆီးခုံနားသို့ ထိထိမိမိကြီး ဖိကပ်မိနေ၇ခြင်းကြောင့်လည်း စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်ယိမ်းယိုင်လာရသည်။ ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ ကားထဲမှာ လူတွေက အလုပ်ဆင်းချိန် အိမ်ပြန်ချိန်မို့ နွမ်းလျမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ငြိမ်သက်နေကြသည်။ မငြိမ်သက်နိုင်တဲ့ သူမတစ်ယောက် ဖင်ဆုံကြီးကို မသိမသာ လှုပ်ရမ်းပြီး နောက်မှ ကောင်လေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲသို့ ပို၍ တိုးဝင်ဖိကပ်ပစ်လိုက်မိသွားသည်။ သူမဟာ အပေါစား မိန်းမတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ပြတ်လပ်နေရတဲ့ အ၇သာတစ်ခုကို ပြန်ပြီး ခံစားမိရချိန်မှာ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားမိတော့..။ ဒီထက် ထူးကဲတဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားရနိုင်ဖို့ကိုဘဲ စဉ်းစားနေမိကာ ဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ကားအရှိန်နဲ့ အတူ ဖိကပ်ဆောင့်ပွတ်နေမိတော့သည်။ ပုဆိုးနဲ့ ရှပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားသော ထိုကောင်လေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ ပါပုံမရ..။ ဘောကန်ဘောင်းဘီလို ပွယောင်ယောင်း အောက်ခံသာ ဝတ်ဆင်ထားပုံရသည်။ သူမရဲ့ ဖင်ဆုံကြီး ဖိကပ်ပွတ်ဆောင့်ပေးနေမှုကြောင့် ထောင်မတ်လာသော အတံကြီးက ရှည်ရှည်မျောမျောကြီး ဖြစ်ကြောင်း အထိအတွေ့ကို ခံစားပြီး မှန်းဆလိုက်မိသည်။ ရှေ့သို့ ထိုးထွက်ထောင်မလာပဲ အောက်သို့စိုက်ကာ ထောင်နေခြင်းက အမျိုးသားများ ဝတ်လေ့ဝတ်ထရှိသော အောက်ခံဘောင်းဘီမျိုးမဟုတ်မှန်း သူမ သိလိုက်သည်။ အရပ်အနည်းငယ် မြင့်သော ကောင်လေးရဲ့ လီးတံကြီးက အရပ်ပုသော သူမရဲ့ ဖင်ဆုံအထက်ပိုင်း စအိုအပေါ် ဖင်ညှောင့်ရိုးနားကို ကျကျနန လာထောက်ကာ ဖိမိနေသည်။ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး အရသာတွေ တက်ပြီးရင်း တက်လာရတော့သည်။ ရှေ့မှထိုင်ခုံ သံတန်းကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကိုယ်ကို အနည်းငယ် ကိုင်းကာ ဖင်ကြီးကို ကောက်ပြီး ပိုမိုဖိကပ်ကာ အရသာယူရင်း အိမ်အပြန်ခရီးကို လိုက်ပါလာခဲ့တော့သည်။
အောင်ကိုမင်း ဒီနေ့ အလုပ်ပြန် နောက်ကျသည်။ ကားက အလွန် ကျပ်နေသည်။ လမ်း (၃၀)မှာ တက်ပြီး ကားနောက်ပိုင်းမှာ နေရာယူရင်း လိုက်ပါလာစဉ် ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်မှ တက်လာသော ဆော်ကြီးတစ်ပွေကြောင့် အိမ်အပြန်ပါ နောက်ကျခဲ့ရတော့သည်။ ဖင်ဆုံကြီးကို အတင်းဖိကပ်ကာ လိုက်ပါလာသော ဆော်ကြီးက တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး …၊ အသက်ကြီးပေမယ့် ဖင်ဆုံကြီးက မာကျစ်နေသေးသည်။ သူ့လီးကို အတင်းဖိကပ်ရင်း အရသာယူနေပုံရသည်။ သိပ်လည်း မစွန့်စားရဲ တော်ကြာ ထအော်နေရင် ကားပေါ်က လူတွေ ဝိုင်းရိုက်မှာ စိုးရသည်..။ ဆော်ကြီးက မတော်တဆ မဟုတ်တော့ပဲ သိသိသာသာကြီး ကပ်ပွတ်နေခြင်းကြောင့် အောင်ကိုမင်း နည်းနည်းလှုပ်ရှားလိုက်သည်။ လီးကို ဖင်ဆုံကြီးနှင့် ထိုးကပ်ထားလိုက်ပြီး ကားအရှိန်နှင့် အတူ ညှောင့်ပေးနေလိုက်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ဒီနေ့မှ အောက်ခံဘောင်းဘီကို အပွဝတ်ခဲ့မိခြင်းကြောင့် လီးက လွတ်လပ်စွာ တောင်မတ်နေနိုင်သည်။ ဆော်ကြီးကလည်း နောက်မှ လီးတံကြီး ကပ်ပေးထားတာကို အရသာယူနေပုံရသည်။ လုံးဝကို .. မငြင်း…။ “ မှတ်တိုင်…ပါတယ်……….” ဆော်ကြီးက အနားမှ သူမဖိုင်တွဲကို လှမ်းယူကာ စပယ်ယာကိုပြောပြီး ထွက်သွားရာ အောင်ကိုမင်း ဆန့်တငံ့ငံ့ကြီး ဖြစ်ကျန်နေခဲ့ရသည်။ သူဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်က နှစ်မှတ်တိုင်လောက် လိုသေးသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမှာ စားခွင်ကောင်းကောင်း ရနေမှတော့ လက်မလွှတ်ချင်တော့…။ ဆော်ကြီးနောက်မှ ကပ်ကာ လိုက်ဆင်းရင်း နောက်မှ မသိမသာ လိုက်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦးတစ်ယောက်မှာလည်း လီးအရသာကို တပ်မက်မိနေပေမယ့် ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင် ရောက်တော့မှာမို့ ဖိုင်တွဲကို ပြန်တောင်းယူရင်း ဆင်းလာခဲ့သည်။ လီးနဲ့ အတေ့ခံ ၊ အထောက်ခံထားခဲ့ရတာကြောင့် သူမ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေက မတရားပင် စိမ့်ထွက်ကျနေသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီလေး ခွဆုံတစ်ခုလုံး စိုစိ ရွှဲနစ်နေသည်။ နောက်မှ ကပ်ကာ ပါလာသော ခြေသံကြောင့် အမှတ်တမဲ့ လှည့်ကြည့်မိလိုက်သော ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားကာ အခုနက ခံစားခဲ့ရသော အတွေ့အထိအရသာတွေ ပြန်ဆောင့်တက်လာသည်။ သူမ ဖင်ကြီးနှင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်ထားခဲ့တဲ့ လီးပိုင်ရှင်လေး က နောက်မှာ…။ အောင်ကိုမင်း အနားသို့ တိုးကပ်လိုက်ပြီး ဆော်ကြီးနှင့် ယှဉ်လျှောက်ကာ စကားပျိုးကာ လမ်းခင်းလိုက်သည်။
“ အစ်မ…ဒီနားမှာ နေတာလား…”
“ အင်း….ဟုတ်တယ်… မင်းကရော..ဒီနားကပဲလား ”
“ ကျနော်က ..ရှေ့နားမှာ မမရဲ့..”
ပြောစရာ စကားမရှိတော့ အောင်ကိုမင်း ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားရသည်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေက သူ့အတွက် ဖန်တီးပေးနေသည်။ လမ်းထဲ ချိုးဝင်ခါနီး နေရာတွင် မီးတိုင်က မလင်းသဖြင့် မှောင်ရိပ်ကျနေသည်။ လူကလည်း ပြတ်နေပြန်သေးသည်။ ဒီတော့…
“ အို……..မင်း…မင်း ဘာလုပ်တာ လဲ…လွှတ်…လွှတ်ပါ……”
“ မမ ဖင်ကြီးနဲ့ ကားပေါ်မှာ ပွတ်ထားတာ ကျနော့် လီး အရမ်းတောင်နေပြီ..၊ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ… မမရဲ့”
အောင်ကိုမင်း လုပ်ရပ်က သူမကို တော်တော် တုန်လှုပ်သွားစေသည်။ လမ်းမှာ ရုတ်တရက် လှမ်းဆွဲကာ ဖက်ထားပြီး မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းက သူမ စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်သွားရသည်။
“အိုး…အဲဒါ ..ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ…ဖယ်နော်…ဖယ်…အော်လိုက်ရမလား….”
“ အော်ချင် အော်လေ…မမ နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ …မမပဲ အရှက်ရမှာနော်….”
“ ဟင်…မင်း………မင်း…ဘာ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ….”
ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားက ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး တစ်ယောက် စိတ်တွေ လွင့်ကနဲဖြစ်သွားစေသည်။ ပက်ပက်စက်စက် ပြောလိုက်တဲ့ စကားသံကြောင့်လည်း သူမ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီး ခံစားမိကာ စောက်ဖုတ်က ရှုံ့ကနဲ ဖြစ်သွားမိသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အရှက်ကွဲ မခံနိုင်..။ နှစ်ယောက်တည်း သိတဲ့ ကိစ္စ တစ်ရပ်ကွက်လုံး သိကုန်ရင် သူမပဲ အရှက်ရမှာမို့ …ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို မရေမရာ၊ ဇဝေဇဝါနဲ့ပဲ လျင်မြန်စွာ ချလိုက်မိသည်။
“ မောင်လေးရယ်…မမက အိမ်ထောင်နဲ့ပါကွယ်….မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…ကွယ်…”
အသနားခံတဲ့ ပုံစံနဲ့ ချော့ကာ ပြောလိုက်သော စကားကြောင့် အောင်ကိုမင်း တွေကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် ဆော်ကြီးက အိမ်ထောင်ရှိပေမယ့် ရွနေတဲ့ ပုံစံကြီး..။ နောက်ပြီး ကြောက်တတ်ပုံလည်း ရသည်။ ဖြဲခြောက်ပြီး ရသလောက်တော့ ဂွင်ဖန်ကြည့်ချင် နေသေးသည်။
“ ဒါဆိုလည်း ..မမ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့မယ် ဗျာ…. မမပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် သိရအောင်…”
လမ်းပေါ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရှက်ကွဲဖို့ နီးစပ်သည်။ အိမ်မှာဆို လင်ကလည်း ဒုက္ခိတ၊ အဖော် ဒေါ်ကြီးကလည်း ညဘက် အိမ်ပြန်အိပ်သူမို့ သူမ တစ်ယောက်တည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရှင်းလို့ ရနိုင်လောက်သည်။ ဒါကြောင့် ထိုကောင်လေးရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံကာ အိမ်သို့ ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ခေါ်သွင်းကာ သူမအိပ်ခန်းထဲ အထိ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့မိတော့သည်။ ဆေးအရှိန်တွေကြောင့် အိပ်ပျော်နေသော လင်ကို တစ်ချက်စစ်ဆေးလိုက်ပြီး မီးဖိုချောင်မှ အဖော် ဒေါ်ကြီးကို ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ အိပ်ခန်းထဲမှာ အခန့်သား ထိုင်နေတဲ့ ဘသားချောလေးဆီ ပြေးရပြန်တော့သည်။ အခန်းတံခါးကို ပိတ်၍ ဝင်လာပြီး ထိုင်နေသော ကောင်လေးကို အသနားခံသော အကြည့်လေးဖြင့်….
“ မောင်လေးရယ်….မင်းက အဒေါ်ရဲ့ တူသား အရွယ်ပါကွယ်…မသင့်တော်ပါဘူး…”
“ ဟားဟား….မမရယ်…ချက်ချင်းကြီး အဒေါ်တွေ ဘာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့..ကျနော့်နာမည် အောင်ကိုမင်း…… မင်းမင်းလို့ ခေါ်…မမနာမည်က……”
“ ကျနော်က မမငြိမ်းလို့ ခေါ်မယ်..”
“ ဟင်းဟင်း….မမငြိမ်းကလည်း ကားပေါ်မှာ မမငြိမ်း ဖင်ကြီးနဲ့ ပွတ်ပေးထားတဲ့ ကျနော့် လီးကြီးကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီပေါ့ ..ဟုတ်လား…”
“ မမငြိမ်း ယောက်ျားက လေဖြတ်နေတာ ဆိုတော့ လိုးမပေးနိုင်ဘူး မဟုတ်လား…”
အိမ်ထဲသို့ ဝင်လာပြီးကတည်းက အခြေအနေမှန်ကို နားလည်သွားတဲ့ အောင်ကိုမင်း အမေးစကားကို ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ဆွံ့အနေရတော့သည်။
“ ဖြေလေဗျာ….မဖြေရင် ဒီနားမှာ …မမငြိမ်း အကြောင်းတွေ လျှောက်ဖွပစ်မှာနော်….”
“ ဟို….ဟို…အဲလိုတော့ မဟုတ်တာတွေ လျှောက်မလုပ်ပါနဲ့ ကွယ်…..”
“ ဒါဆို…ကျနော် မေးသမျှ အကုန်ဖြေမှာလား…”
“ မမငြိမ်း ယောက်ျားက ဘယ်တုန်းက လေဖြတ်သွားတာလဲ……”
“ ဟာ….ဒါဆို.. မမငြိမ်းကို မလိုးပေးနိုင်တာ ကြာပြီပေါ့…. ဒီကြားထဲ ဘယ်သူ့ကို အလိုးခံသေးလဲ…”
မင်းမင်းရဲ့ မေးခွန်းတွေက တစ်တစ်ခွခွတွေမို့ သူမ ပြန်ဖြေဖို့ နှုတ်မရဲ..။ ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမလဲ မသိ။ ပါးစပ်က ဘယ်လိုမှ မထွက် ဖြစ်နေသည်။
“ ဖြေလေ ဗျာ..”
“ ဒါဆို…..ကားပေါ်မှာ ကျနော့်လီးနဲ့ တေ့ခံထားရတော့ အလိုးခံချင်လာတာပေါ့….”
“ မင်းမင်းရယ်… မမ ပြောလို့ မထွက်ဘူး….ကွယ်…”
“ ကောင်းပြီလေ..ဒါဆိုလည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြ…..”
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး လေးတွဲ့စွာ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။
“ ကဲ….ဒါဆိုလည်း အဝတ်တွေ ချွတ်ရအောင်…”
“ မမငြိမ်းကို …. လိုးပေးမလို့ပေါ့ ….ဟဲဟဲ….”
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး တစ်ယောက် ဖင်ဆော့မှုကြောင့် ခုလိုထိဖြစ်လာရတာကို မကျေနပ်ပေမယ့် မသိစိတ်တွေက လွှမ်းမိုး အနိုင်ယူခြင်း ခံလိုက်ရတော့သည်။ သူမကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို တစ်လွှာချင်း ချွတ်ပစ်နေတဲ့ မင်းမင်း ရဲ့ လက်တွေအောက်မှာ တစ်သွေမတိမ်း လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ပေးနေမိတော့သည်။ မင်းမင်းက ဆော်ကြီးကို အကျပ်ကိုင်ကာ ခိုင်းစေနေပုံက ရင့်လှသည်။ ခုတင်ခြေရင်းမှာ ထိုင်နေရင်း အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ခိုင်းနေရင်း သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး လီးကိုင်ဆုတ်ကိုင်ကာ ဂွင်းထုနေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်မကပ်တော့ပဲ ဗလာကျင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဦး ရဲ့ အလှက အခုမှ ပိုမိုပွင့်ထွက်လာသည်။ ကလေးမမွေးဖူးသေး သဖြင့် ဝမ်းဗိုက်သားလေးက ချပ်ယပ်နေပြီး နို့အုံကြီးတွေကလည်း တင်းရင်းချွန်ထွက်နေကာ ငှက်ပျောဖူးကြီးတွေလို တုံခတ်နေသည်။ ပေါင်တံကြီးတွေကလည်း တုတ်ခိုင်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး ဖွေးဆွတ်နေသည်။ သူမကို ကြည့်ပြီး အရသာခံကာ ဂွင်းတိုက်နေတဲ့ မင်းမင်း လီးတံကြီးကို ဒေါ်ငြိမ်းဦး တပ်မက်စွာ ကြည့်နေမိသည်။ သူမ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကလည်း အလိုလို ဖောင်းထကာ နှစ်ရှည်လများ ပြတ်လပ်နေခဲ့ရသော လီးအရသာကို ငံ့လင့်လွန်းရသဖြင့် အရည်တွေပင် ယိုစီး စိမ့်ကျနေပြီ..။ စိတ်တွေလည်း ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့..။ ကုတင်စောင်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ မင်းမင်းကို အိပ်ရာပေါ်သို့ တွန်းလှဲပစ်လိုက်တော့သည်။ ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ကာ မင်းမင်း ကိုယ်ပေါ် ကားယားခွထိုင်လိုက်ပြီး လီးတံကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ကာ သူမ စောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ကပ်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ရှေ့သို့ အနည်းငယ် ကုန်း၍ လက်ထောက်လိုက်ပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားကာ ပွတ်တိုက်ပြီးမှ ဖိချသွင်းယူလိုက်သည်။
လီးကို အဆုံးထိ ဖိချ သွင်းပစ်လိုက်ပြီး အရသာခံကာ ဖင်ဆုံကြီးကို နှဲ့ဝိုက်ကာ မွှေ့ရမ်းပစ်လိုက်သည်။
“ အိုး… မမငြိမ်း တော်တော် ခံချင်နေတာပဲ… ဆောင့်စမ်းပါ..မမရ.. ဖင်ကြီးကို ဖိဖိပြီး ပစ်ဆောင့်စမ်းပါ… အား…….အိုး…”
မင်းမင်းက မငြိမ်းငြိမ်းဦးရဲ့ စိတ်တွေကို မီးမြှိုက်ပေးသလို ဆွပေးလိုက်ရင်း အောက်မှ ပင့်ကာ ဆောင့်တင်ပေးလိုက်သည်။
အ…အင့်…….ကျွတ်ကျွတ်…..မင်းမင်း ရယ်… ကောင်းလိုက်တာကွယ်….”
စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားသဖြင့် မငြိမ်းငြိမ်းဦး အခေါ်အဝေါ်တွေက နူးညံ့ကာနေသည်။ ဖင်ကြီး ကုန်းကာ ခွဆောင့်နေသောကြောင့် ဝဲနေသော မငြိမ်းငြိမ်းဦး နို့ကြီးနှစ်လုံးက အိပ်မွေ့ချနေသလို ။မင်းမင်းက ဝဲခါနေသော နို့နှစ်လုံးကို လက်ဖြင့် တင်းတင်း ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း အောက်မှ ကော့ပင့် ဆောင့်ပေးနေသည်။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးကလည်း ဖင်ဆုံကြီးကို မြှောက်မြှောက်ပြီး အတင်းပင် ဆောင့်လိုးချနေသည်။
“ ဆောင့်…မမငြိမ်း…စိတ်ကြိုက် ဆောင့်စမ်းပါ..အား…ဖင်ကြီးတွေ တအားနဲ့ ဆောင့်ချ..အ….”
“ အိုး….မောင်ရယ်…ထိတယ်ကွယ်…. အီး..အင်း…ဟင်း…အား..အား…အိ..ပင့်ဆောင့်ပေးပါအုံး… အား….ဟုတ်ပြီ…ထိတယ်…အ…အမလေး…မမ..ပြီးခါနီးပြီ..အ..အ…ပင့်ဆောင့်…အား…အိုး..ညှစ်စမ်းပါ… နို့တွေကို ညှစ်..အား…..အို..ဆောင့်………”
မငြိမ်းငြိမ်းဦး တစ်ယောက် အရမ်းကို နှာထန်လွန်းနေသည်..။ အနှစ်နှစ် အလလ ငတ်ပြတ်နေခဲ့ရတဲ့ လီးကို စိတ်ကြိုက် အပေါ်မှ ဆောင့်လိုးနေရသဖြင့်လည်း ကာမစိတ်တွေက ထိန်းမရဖြစ်ကာ ပါးစပ်မှ တစ်တစ်ခွခွ စကားတွေ ဒရစပ်ပြောပြီး ဖိလိုးနေတာ မရပ်..။ မင်းမင်းကလည်း ဆော်ကြီး နှာထန်ပုံကို အကြိုက်တွေ့ကာ နို့တွေကို ပြတ်ထွက်မတတ် ညှစ်ကိုင်ရင်း အောက်မှ ကော့ကော့ပြီး ပင့်လိုးပေးနေသည်..။
အမလေး…အ……….ထွက်ပြီ….အား.အ… အမေရေ…အား….. ဟင်း……”
မငြိမ်းငြိမ်းဦး တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါကာ ဖင်ဆုံကြီးကို အတင်းဖိချဆောင့်လိုးပြီး စောက်ရေတွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်..။ မင်းမင်းလည်း ဆော်ကြီး ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ နို့တွေကို ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ထားရာမှ လက်လွှတ်ကာ ဖင်ကြီးတွေကို ဆွဲဖြဲပြီး အောက်မှ အဆက်မပြတ် ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တော့သည်..။ ကားပေါ်မှာကတည်းက တောင်နေခဲ့ရတဲ့ လီးက မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စက်သေနတ်ပစ်သလို ပစ်ပစ်ဆောင့်ရင်း လရည်တွေကို စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်သည်..။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးမှာ သူမ စိတ်ကြိုက် ဆောင့်လိုးပြီး စောက်ရည်တွေ ဒလကြမ်း ထွက်နေချိန်မှာပင် ပင့်ဆောင့်လိုးခံရပြီး လရေတွေ ပန်းဝင်လာမှုကြောင့် နောက်တစ်ချီထပ်ကာ ပြီးသွားရတော့သည်..။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:09